माया त माया हो - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको हार्ट ब्रेकिङ समाचार ।
प्रियंका प्रेममा परेकी छिन् ।
प्रियंका र अभिनेता आयुष्मान देशराज श्रेष्ठबीच प्रेमसम्बन्ध ।
पछिल्ला केही साता अनलाइनहरूले यस्तै शीर्षकमा गसिप तथा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । नेपाली चलचित्रकी सर्वाधिक व्यस्त एवं चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्कीका बारेमा आएका यस्ता गसिप तथा समाचारका बारेमा प्रियंका भने मौन छिन् । केही दिनअघि प्रियंका अभिनीत चलचित्र ‘राधे’को पत्रकार भेटघाटमा एक पत्रकारले सोधे, ‘तपाईंका बारेमा अचेल भाइरल भएको गसिपका बारेमा केही भन्नुस् न ।’ हाजिरीजवाफमा चतुर प्रियंकाले भनिन्– ‘तपाईं नै गसिप भनिरहनुभएको छ भने मैले के भन्ने?’
जे–जसरी टारे वा ढाँटे पनि प्रेम लुकाएर लुक्दैन, त्यस्तै भयो । प्रियंका र आयुष्मानको सम्बन्धको हल्ला सुरु भयो चलचित्र ‘कथा काठमाडौं’को छायांकनस्थलबाट । चलचित्र ‘कथा काठमाडौं’मा यी दुई एकसाथ अभिनय गरिरहेका छन् । प्रियंकाको छायांकन भैरहेका बेला आफ्नो छायांकन नभए पनि आयुष्मान घण्टौं छायांकनस्थलमा बस्न थालेपछि युनिटबाटै प्रियंका र आयुष्मानबीच ‘खिचडी’ पाकिरहेको गसिप बाहिरियो । अनलाइनहरूमा उक्त खबर भाइरल नै बन्यो । अहिले यी दुईबीचको सम्बन्धको चर्चाले कलिउडलाई राम्रैसँग तताएको छ ।
चलचित्र ‘कथा काठमाडौं’को छायांकनबाट केही बेरलाई फुर्सद पाएकी प्रियंका कार्कीले दरबारमार्गको एक क्याफेमा साप्ताहिकसँग कुराकानी गर्ने समय निकालिन् । साथमा थिए— आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ । प्रियंकाले भनिन्— ‘हामी मिल्ने साथी हौं । अझ हाम्रो सम्बन्ध साथीभन्दा केही माथि नै छ ।’ सीधा रूपमा आफूहरूबीच प्रेम रहेको स्वीकार नगरे पनि प्रियंका र आयुष्मानले उनीहरू एक–अर्काको अत्यन्त निकट रहेको कुरा भने अस्वीकार गरेनन् ।
दरबारमार्गको उक्त क्याफेमा झन्डै दुई घण्टा बस्दा आयुष्मान र प्रियंकाले उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई प्रस्ट्याउँदै गए । उनीहरूले यसलाई प्रेमकथा नमाने पनि यसको बीजारोपण धेरै वर्षअघि नै भैसकेको रहेछ । धेरैले चलचित्र ‘कथा काठमाडौं’को सेटबाट प्रेम प्रारम्भ भएको बताए पनि प्रियंका र आयुष्मान उक्त कुरा मान्न तयार छैनन् । चलचित्र ‘कथा काठमाडौं’सम्म आइपुग्दा त उनीहरूबीचको सम्बन्ध वयस्क भैसकेको थियो । जबकि उनीहरूको चिनाजानी रातो बंगला स्कुल पढ्दा नै भएको हो ।
प्रियंकाले कक्षा ६ देखि रातो बंगला स्कुल पढेकी हुन् । उनी रातो बंगलामा कक्षा ६ मा हुँदा आयुष्मान कक्षा २ मा थिए । आयुष्मान प्रियंकाभन्दा पाँच वर्ष कान्छा छन् । आयुष्मानका अनुसार एक दिन प्रियंका कुनै कारणले स्कुलको एकान्त स्थानमा बसेर रोइरहेकी थिइन् । आयुष्मान उनलाई देखेर नरोऊ भनी फकाउन गए । त्यतिबेलै उनीहरूबीच मित्रता भयो ।
पछि प्रियंका चलचित्र अभिनेत्रीका रूपमा चर्चामा आइन् । आयुष्मानले पनि ‘चपली हाइट–टु’ बाट चलचित्रमा डेब्यु गरे । एउटै क्षेत्रमा भएपछि चिनाजान हुनु सामान्य थियो । त्यसमाथि आयुष्मान सुपरिचित बैंकर्स रविना देशराज श्रेष्ठको सुपुत्र भएकाले पनि रविनासँगको सुमधुर सम्बन्धमा रहेकी प्रियंका र आयुष्मान नजिकिनु अस्वाभाविक थिएन ।
इन्स्टाग्रामको लत लागेको छ प्रियंका कार्कीलाई । दैनिक घटीमा पनि दुई पटक उनी इन्स्टामा अपडेट हुन्छिन् । इन्स्टामा उनले ‘ह्यासट्याग थ्यांक्यु युनिभर्स बाट गरेको केही अपलोडबाट आयुष्मान प्रभावित थिए । ब्रह्माण्डको अस्तित्वकै कारण आफ्नो पनि अस्तित्व रहेको मान्ने प्रियंकाझैं आयुष्मान पनि त्यसरी नै सोच्दा रहेछन् । भेटघाट हुँदा यही कुराले यी दुईलाई नजिक बनायो । बाल्यकालमै स्कुलमा बिजारोपण भएको मित्रता त्यसपछि मौलाउन थाल्यो ।
आयुष्मानको नजरमा प्रियंका
इन्डिपेन्डेन्ट : अरूका लागि जतिसुकै सोचे वा गरे पनि जीवनमा आफ्ना लागि पनि धेरै कुरा गर्नु जरुरी छ भन्ने बुझेकी छिन् । आफ्नो स्वतन्त्रतामा अरूको हस्तक्षेप मन पराउँदिनन् ।
कामको सम्मान : उनी जति बेला जुन काम गर्छिन्, त्यसमा आफ्नो शतप्रतिशत दिन सक्छिन् । चलचित्रमा काम गर्नु त उनको सबैभन्दा ठूलो काम हो, जसका लागि उनी जन्मिएकी हुन् । शरीर अस्वस्थ हुँदा समेत काम गर्न तम्सिएको पाउँछु ।
वचनको पक्का : उनी बोली फेर्न जान्दिनन् । कसैलाई कुनै कुराको वचन दिएकी छिन् भने आफूलाई अप्ठेरो पर्दासमेत वचन पूरा गर्छिन् । कतिपय अवस्थामा उनको यो क्रियाकलापले मलाई पनि अचम्मित तुल्याउँछ । यही कारणले पनि उनी चिन्ने–जान्ने सबैको प्यारी भएकी हुन् ।
क्लम्जी : आफू वरपर भएका कुरामा ध्यान दिन्नन् तर जब ठेस लाग्छ अनि बल्ल उनलाई महसुस हुन्छ कि पहिल्यै ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो ।
विचार एक भए मन मिल्न समय लाग्दैन भन्ने सोच भएका आयुष्मान र प्रियंका दुवैमा गीत गाउने रहर छ । प्रियंकाले आफ्नो सुमधुर स्वरमा धेरैवटा कभर संग गाइसकेकी छिन् । दुई वर्षयता उनले युट्युबमा आफूले गाएका कभर संगको भिडियो अपलोडसमेत गरिरहेकी छिन् । कलेज जीवनदेखि आयुष्मानले पनि विभिन्न अंग्रेजी गीतको कभर भर्सन अपलोड गर्दै आएका छन् । गीत गाउने रहर मिल्ने भएपछि एक वर्षअघि प्रियंका र आयुष्मानले चलचित्र ‘चिनो’का लागि आशा भोषले तथा नारायणगोपालले गाएको सदावहार गीत ‘माया त माया हो’ को कभर सङ गाउने निधो गरे । उक्त कभर सङको भिडियो युट्युबमा अपलोड भयो, जुन अहिलेसम्म २३ लाखभन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ ।
‘कभर गीत गाएपछि हामीसाथीका रूपमा नियमित भेटघाट गरिरहन्थ्यौं, तर हामी मात्र साथी थियौं ।’ प्रियंकाले बताइन् । पाँच महिना अघि पनि उनीहरूले गायिका मेघान ट्रेनरको गीत ‘लाइक आइएम गोना लुज यू’ को कभर भिडियो बनाइ यूट्यूबमा अपलोड गरेका छन् ।
अहिलेको प्रियंकासँगको निकट सम्बन्धका बारेमा आयुष्मान भन्छन्– ‘यसलाई सामान्य भाषामा प्रेम भन्न नमिल्ला, बरु एक–अर्कासँगको गहिरो मित्रता भन्न सक्नुहुन्छ । अझ भाइब्स मिलेको मान्न सकिन्छ ।’ प्रेम नै भए पनि उनीहरू आफ्नो सम्बन्धलाई प्रेमभन्दा फरक नाम दिन खोजिरहेका थिए, तर वास्तवमा यी दुई एक–अर्काको गहिरो प्रेममा छन् । एक हिसाबले आध्यात्मिक प्रेम अथवा दार्शनिक प्रेम ।
चलचित्र कथा काठमाडौंको सेटबाट एक रात साढे ११ बजेतिर आयुष्मानले प्रियंकालाई लिएर दरबारमार्ग गए । शेर्पा मलअगाडिको आइसक्रिम पार्लरमा दुई कप आइसक्रिम किने अनि एक–अर्काको हात समातेर बिस्तारै हिंड्दै, सुनसान दरबार मार्गको दुई चक्कर लगाए । ‘मैले जीवनमा त्यत्तिको रोमान्टिक अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएकी थिइन् । मलाई उसको यस्तो रोमान्टिक व्यवहारले ऊप्रति थप आकर्षित गरिरहेको छ,’ –प्रियंकाले पुलकित हुँदै भनिन् । उनले त्यसोभन्दा आयुष्मान मुस्कुराइरहेका थिए ।
विवाह भएर पारपाचुके गरिसकेकी प्रियंका दयाहाङको प्रेममा परेको कुरा पनि एकताका चर्चामा आयो । प्रियंका भन्छिन्– ‘म आफ्ना सहकलाकार एवं सहकर्मी प्राय: सबैसँग घुलमिल भैहाल्छु । दयासँग धेरै पटक धेरै चलचित्रमा साथै काम गरियो । ऊ मेरो राम्रो साथी भएको छ । साथी–साथीबीचको सम्बन्धलाई कसैले प्रेम भन्छ भने ऊ पनि सही हो । साथी–साथीबीच असल प्रेम त हुन्छ नि ।’ अनि केहीले उनीमाथि ‘चपली हाइट–टु’की अभिनेत्री परिमिता राणासँग मौलाइरहेको आयुष्मानको प्रेममा तगारो बनेको दोषारोपणसमेत गरिरहेका छन् । आयुष्मान भन्छन्– ‘त्यो सम्बन्ध मेरो जीवनको एउटा अर्कै पाटो थियो, जसले प्रियंकासंगको सम्बन्धमा कुनै सरोकार राख्दैन । म अहिले त्यो सम्बन्धमा छैन । त्यो कथामा प्रियंका थिइनन् । अहिले प्रियंकासँगको सम्बन्ध अर्कै कथा हो ।’ यसलाई खुलस्त गर्दै प्रियंकाले भनिन्– ‘आयुष्मानको सम्बन्धमा म पनि खुसी थिएँ । उनीहरूको सम्बन्ध केही कारणले बिग्रियो, जसमा मेरो कुनै भूमिका छ भन्नु सपनामा चौरासी व्यञ्जन खाएजस्तो मात्र हो ।’
‘हामी आज, अहिलेको यो क्षणमा बाँचिरहेका छौ । एकैछिनमा के हुन्छ ? भोलि के होला ? भनेर हामी सोच्दैनौं । हामी दुवैको बानी त्यस्तै छ । त्यसैले हाम्रो यो सम्बन्धको भविष्य के छ वा हामीले कुन गन्तव्य पहिल्याउँछौं भनेर अहिले नै केही सोचेका वा योजना बनाएका छैनौं । हामी ब्रह्माण्डको शक्तिमा विश्वास गर्छौ । वास्तवमा ब्रह्माण्ड छ र नै हामी छांै । भोलि यो सम्बन्धले हामीलाई कस्तो खुसी दिन्छ भनेर कल्पनुभन्दा अहिले प्राप्त खुसी र आनन्दमा रमाउनु उपयुक्त हो ।’
दुवैको भनाइमा उनीहरूको यो गहिरो सम्बन्धबाट अभिभावकहरू पनि खुसी छन् । आयुष्मानले आफ्नी मम्मी रविना देशराज, भाइ आशिरमान, बुवा तथा एक जना साथीलाई यसको जानकारी गराइसकेका छन् भने प्रियंकाले पनि आफ्ना आमा, दुई सानीमा, भाइ तथा केही साथीलाई यो सम्बन्धको यथार्थ बताइसकेकी छिन् । प्रियंका भन्छिन्– ‘म सानैदेखि बाबाकी छोरी भएर हुर्किएँ । बाबालाई खुलेर भन्न सकेकी छैन, तर यथार्थ उहाँलाई पनि थाहा छ र मेरो खुसीमा उहाँ पनि खुसी नै हुनुहुन्छ ।’
प्रियंकाको नजरमा आयुष्मान
इमान्दारी र सम्मान : ऊ जे छ, त्यस्तै देखिन्छ, साह्रै इमान्दार । काम, परिवार, समय, सम्बन्धजस्ता कुरामा त अझ इमान्दार पाएकी छु । ऊ सबैलाई सम्मान गर्छ । ऊ भन्छ कि सम्मान देखाउने होइन, गरेपछि आफैं देखिन्छ ।
सुग्घरी : केही कुरा नमिलाइएको वा छरपस्ट देख्यो भने त्यसलाई आफैं मिलाउन थाल्छ । ऊ आफ्नो घर, कोठा मात्र होइन, बाहिर पनि सफा–सुग्घर राख्न चाहन्छ । सामान्य कुरामा पनि उसको ध्यान जान्छ । जस्तो कि कतै भित्तामा टाँगिएको तस्बिर वा पेन्टिङको फ्रेम बांगिएको छ भने त्यसलाई मिलाएपछि मात्र उसलाई आनन्द आउँछ । अंग्रेजीमा यसलाई ‘ओसिडी’ भनिन्छ । जुन कहीं–कतै राम्रो बानी हो, तर केही स्थानमा नराम्रो पनि ।
फन्नी : यति धेरै रमाइलो छ कि अरूलाई हँसाइरहन सक्छ । जीवनमा हाँसिरहनु पर्छ भन्ने विचार लिएको उसको सेन्स अफ ह्युमर पनि निकै
केयरलेस : आफ्ना लागि बढी केयरलेस छ, अझ आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा त पूरै केयरलेस छ ।